Te ho tsara tarehy amin’ny fety : Ny tokony atao dieny izao!
Neny miova kely, hiatrika ny fety
Andro vitsy sisa dia higadona ny fetin’ny reny. Mbola tsy tara anefa raha izao ianao reny no maniry hikarakara endrika kely sy hamoaka ny hatsarana amin’io andro io. Tena mety ihany koa raha atolotra atao fanomezana ho an’i neny ny karatra hahafahana mikaraka endrika sy volo, tahaka ireto reny nisafidy ny hiova kely ireto.
Tapa-bolana mialohan’ny fetin’ny krismasy sy ny faran’ny taona isika izao. Betsaka no mihevitra fa ao anatin’ny fety mihitsy vao hikarakara endrika sy bika kely. Nodisoin’ny matihanina izany. Nambaran’izy ireo mantsy, fa dieny izao dia efa mila koloina ny hoditra hahazoana endrika tena miavaka amin’ny fety …
Dieny izao dia efa tsara manadio tarehy tanteraka eny amin’ny matihanina na ny “salon” ny vehivavy mba hahafahana manatsara sy manomana ny endriny sahady. “Nettoyage en profondeur” no atao, izay maharitra 1ora30minitra hatramin’ny 2ora eo arakarak’ilay hoditra. Raha tsy manana olana manokana ilay hodi-tava dia esorina tanteraka fotsiny ny loto rehetra, ny « points noirs », ny karazana « sébum » miraikitra sy manentsika mason-koditra toy izay eo amin’ny orona, … Anton’izay fanadiovana izay, ny fitsinjovana ilay hodi-tava izay ho rakofana « maquillage » matetika atsy ho atsy. Averina kosa ity fanadiovana tanteraka ity, roa andro mialohan’ny lanonana na ny fety ho vonjena.
Raha manana olana
Tanjona amin’ny fanomanana tarehy dieny izao, araka ny fanadihadiana nataonay, ny mba hananana hodi-tava tena madio, milamina, ary mihiratra tsara amin’ny fotoana hilana azy na izay lanonana ho vonjena. Raha toa indray ka manana hoditra misy olana toy ny mony dia tsara raha manao “soin” voatokana hitsaboana azy. Tsy tahaka ilay notanisaina tetsy ambony anefa izany fa mety haharitra kokoa. Noho izany dia tsara indrindra raha hatao isa-kerinandro izany mba hanalana tsara ireo menaka be mihoatra ny tokony ho izy avoakan'ny hoditra ka manjary mahatonga ireo mony.
Hoditra matoy, mahazo taona
Raha manana ireny hoditra efa somary mahazoazo taona indray dia tsara ny manao soin tahaka ny notanisaina voalohany tery ambony. Atao dieny izao ny fanadiovana ifotony, ary averina kely roa andro mialohan’ny fotoana hilàna azy. Omen-danja manokana amin’izany ny fanorana ny hoditra mba hamelombelombolo azy ka hampikoriana tsara ny ra ary hampiasana ny hozatrin'ny tava iray manontolo.
Tsy adino ny fahazarana hatramin’izay
Na izany aza nefa dia tsy azo atao ambanin-javatra ny mampiasa ireo akora efa mahazatra isan’andro. Tsy inona akory izany fa ny fanasana azy amin’ny “lait” sy “lotion”, ny fiarovana azy amin’ny alalan’ny “crème du jour” sy ny “écran” ary ny fikojakojana azy amin’ny alalan’ny “creme de nuit” raha misy olana toy ny kentrona, ny tasy … Ankoatra ireo kosa ny famelombelomana azy isa-kerinandro amin’ny “gommage” sy maska.
Isaorana i Ambinintsoa Rasoanaivo, estheticienne
Beauty And’Ntsoa Faravohitra
Fifandraisana : 033 11 276 98